नविकरण नगरी महोत्सव आयोजना गर्ने संस्थाको उद्घाटन मुख्य मन्त्री शेरधन राईले गर्ने
- सुखिलाल चौधरी
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १४, २०७४ समय: ९:४९:३६
१४ फागुन, उदयपुर। त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाटले विगत दुई वर्षदेखि नविकरण नगरी बसेको संस्थाले आयोजना गरेको महोत्सवको प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ र ०७४÷०७५ को नविकरण नगरी बसेका त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघले लगाउने मेलाको उद्घाटनको प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले गर्ने भएको छ ।